Xaafiyo Mas’uuliyiin dhowr ah oo si degdeg ah uga dagay Gaalkacyo | TOP NEWS
Xaafiyo Mas’uuliyiin dhowr ah oo si degdeg ah uga dagay Gaalkacyo
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey.
Waxaa ka mid ah Wafdiga uu hogaaminayo Madaxweynaha Galmudug xubno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Qaar ka mid ah Golaha Wasiirada ee Galmudug.
Dhanka kale waxaa isla maanta gaaray magaalada Gaalkacyo Wasiirka arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Eng Cabdi Sabriye iyo wafdi uu hoggaaminayo, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo.
Ujeeddada socdaalka wafuudan kala duwan ayaa guud ahaan la xiriirta sidii loogu diyaar garoobi lahaa soo dhaweynta Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado in uu booqdo magaalada Gaalkacyo maalinta berito ah.
Ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la arkayaa ciidamo badan oo amniga sugaya, iyadoo dhanka kale si weyn looga dareemayo magaalada marti gelinta Wafdiga Madaxweyne Farmaajo oo socdaal dhanka lugta ah ku soo maray qaar ka mid ah magaalooyinka dowlad Goboleedka Puntland.
Xaafiyo Mas’uuliyiin dhowr ah oo si degdeg ah uga dagay Gaalkacyo added by Tifaftiraha Somalida Maanta on January 12, 2018